Momba anay - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Zhejiang Shineway Industry Limited. dia naorina tamin'ny 2000. Ny orinasa ankehitriny dia miorina ao amin'ny Longwan Binhai Park (akaikin'ny seranam-piaramanidina), izay mankafy ny lazan'i "China Valve City", miaraka amin'ny velarany 15,000 metatra toradroa. Ny orinasanay dia manana orinasa telo manokana: orinasa mpiorina baolina, fananganana vy, orinasa fanaovana valizy baolina. Ny orinasa izao dia manana atrikasa fandefasana lafaoro famelana elanelam-potoana, atrikasa fanodinana seho, atrikasa fanodinana valizy ary laboratoara misy karazany. Ny orinasanay dia miasa amin'ny foto-kevitry ny "miorina amin'ny fahamendrehana, ny mpanjifa aloha". Kalitao avo, vidiny ambany, serivisy aorinan'ny varotra lafatra.
Zhejiang Shineway Industry Limited dia orinasa mpanamboatra matihanina mampiditra casting, famokarana, varotra ary serivisy. Ny orinasa dia manome ny mpampiasa amin'ny vokatra avo lenta sy mahay. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny spheres, castings, valves ball sns.
Ny savaivon'ny tontolon'ny dia 1 1/2 ka hatramin'ny 36 sentimetatra. Ny fitaovan'ny sehatra dia: F304, F304L, F316, F316L, A105, LF2, F6A, 410, 4130, 4140, F51, sns.
Ny vokatra fanariana dia mandray ny teknolojia fasika mifono, tsara tarehy ny fisehoana, ary tsy mila voakilasy aorian'ny famolavolana azy, ary azo zahana mivantana sy atambatra. Ny vokatra fanariana dia misy valves, fittings fantsom-bozaka, kojakoja valizy sns sns, ary azo namboarina ihany koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ho an'ny vokatra valizy baolina, mampiasa ny filatsahanay sy ny boriborinay manokana izahay, izay afaka mifehy tsara ny kalitao sy ny datin'ny fandefasana ireo vokatra, ary mifaninana ny vidiny. Ny valin'ny valizy dia misy valves baolina mitsingevana, valve ball voafaritra, valves baolina vy vy, valves baolina vy, valves ball flanged, valves ball threaded, API6D valves valves, sns.
Ny vokatra dia amidy tsara amin'ny tsena anatiny sy ivelany, ary aondrana any Rosia, India, Polonina, Italia, Hong Kong, Macao ary Taiwan ary firenena sy faritra hafa, ary nahazo fankasitrahana sy fiderana lehibe avy amin'ireo mpivarotra anatiny sy avy any ivelany.
Hanome vokatra avo lenta, serivisy avo lenta ny orinasa ary hanangana am-pitandremana ny marika "SHINEWAY". Miarahaba am-pahatsorana ireo mpivarotra an-trano sy avy any ivelany hiantso anay.